कोरोना नियन्त्रणका लागि सरकारले चाल्यो यस्तो महत्वपूर्ण कदम, आजैबाट देशभर लागु गरिने घोषणा ! [सुचनासहित] – Online Nepal Site
मुख्य पृष्ठ /News/कोरोना नियन्त्रणका लागि सरकारले चाल्यो यस्तो महत्वपूर्ण कदम, आजैबाट देशभर लागु गरिने घोषणा ! [सुचनासहित]
कोरोना नियन्त्रणका लागि सरकारले चाल्यो यस्तो महत्वपूर्ण कदम, आजैबाट देशभर लागु गरिने घोषणा ! [सुचनासहित]
कोरोना नियन्त्रणका लागि सरकारले चाल्यो अर्को एउटा यस्तो महत्वपूर्ण कदम ! सरकारले कोरोना भाइरसको रोकथाम कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ । समितिले कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिसङलाई प्रभावकारी बनाउन नेपाल प्रवेश गर्ने नाकाबाट प्रवेश गर्ने व्यक्तिलाई अनिवार्यरुपमा होल्डिङ सेन्टरमा राख्नेछ !
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा रहेका अस्पतालसँग समन्वय गरी कोभिड–१९ को रोकथाम र नियन्त्रण गर्नका लागि समिति गठन गरेका हुन् ।मन्त्रालय वा विभागको ११ औं तहका कर्मचारीको संयोकत्वमा राष्ट्रिय स्वस्थ्य तालिम केन्द्रका शाखा अधिकृत र मन्त्रालयकै जनस्वास्थ्य अधिकृत सदस्य रहेको तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको हो । समितिले प्रदेशमा कोभिड–१९ को रोकथाम र नियन्त्रण गर्न आइपर्ने समस्यालाई प्रदेश, जिल्ला र स्थानीयतहसँग समन्वय गर्ने र कोभिड–१९ बाहेकको अन्य नियमिति सेवा प्रवाह गर्न समन्वय गर्नेछ । नाकाबाट नेपाल प्रवेश गर्ने व्यक्तिलाई अनिवार्यरुपमा मापदण्डअनुसार क्यारन्टिनमा राख्ने छ !
यसैगरी समितिले अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी कोभिड–१९ को सङ्क्रमणमा भई अस्पताल सञ्चालनमा समस्या परे हब तथा सेटलाइट अस्पतालबाट स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य सहयोगी कर्मचारीको व्यवस्थापनमा समन्वय गर्ने, कोभिड–१९ डेडिकेटेड अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट निर्माण कार्य यथाशीघ्र गर्नका लागि पलह गर्ने, आइसियु र भेन्टिलेटरको व्यवस्थापनमा समन्वय गर्ने, एम्बुलेन्स सेवा व्यवस्थापनका लागि समन्वय गर्नेलगायत काम गर्ने गरी समिति गठन गरिएको हो । नेपाल प्रवेश गर्ने नाकाबाट प्रवेश गर्ने व्यक्तिलाई अनिवार्यरुपमा मापदण्डअनुसार क्यारन्टिन र होल्डिङ सेन्टरमा राख्ने र अनिवार्य रुपमा पिसिआर परीक्षणको व्यवस्थाको समन्वय गर्नेछ ।